Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 9)
Noocyada 5G ee Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro ayaa la iibin doonaa laga bilaabo Oktoobar 23 gudaha Shiinaha, sida ay sheegtay shirkadda.
Vivo U3: Nooca cusub ee bartamaha kala duwan ayaa rasmi ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Vivo U3 cusub, taleefanka nooca dhexe ee nooca oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha horayba.
Xiaomi waxay bilaabi doontaa in ka badan 10 mobiles oo leh 5G sanadka 2020
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Xiaomi ee ah in ugu yaraan toban telefoon oo 5G ah oo ku habboon suuqa loo soo bandhigo sannadka 2020-ka oo dhan sida uu horay u sheegay agaasimuhu.
Huawei Nova 5z: Taleefanka cusub ee xadka Nova
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexida rasmiga ah ee Huawei Nova 5z, taleefanka cusub ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Honor V30 wuxuu imaan doonaa Nofeembar oo isku xirkiisa 5G ayaa la xaqiijiyay
Waxay noqon doontaa mid ka mid ah calaamadaha ugu wanaagsan ee sanadkan, gacmaha hoos. Sharafta V30 ayaa si rasmi ah loo sameyn doonaa ...
Bilaabidda beta-kii ugu horreeyay ee One UI 2.0 ee Galaxy Note 10 ayaa dib u dhacday
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in beta-kii ugu horeeyay ee One UI 2.0 loogu talagalay Galaxy Note 10, uu la kulmi doono dib u dhac maalmo yar ah, sidii ay ugu dhacday Galaxy S10
Beta-kii ugu horreeyay ee Android 10 ee Galaxy S10 horeyba looga heli jiray Spain
Beta-kii ugu horreeyay ee Android 10 oo leh lakabka hal-abuurka One UI 2.0 ayaa hadda laga heli karaa Spain iyo waddamada kale ee Midowga Yurub.
Huawei waxay ku dari kartaa barnaamijyada Google ee Mate 30 haddii xannibaadu dhammaato
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan hadalada madaxa shirkadda Huawei ee sheegaya in Mate 30 uu yeelan karo barnaamijyada Google haddii xayiraadda laga qaado.
Xiaomi Mi MIX Alpha wuxuu adeegsan doonaa agab qiimo sare leh
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Xiaomi Mi MIX Alpha oo u adeegsan doona alaab qiimo leh soo saarkeeda maadaama aan horeyba u awoodnay inaan si rasmi ah u ogaanno.
Oppo K5: kuwan oo dhan waa qeexitaannadiisa farsamo ee xaday
Liistada qeexitaannada farsamo iyo astaamaha ugu muhiimsan ee Oppo K5 ayaa soo muuqday oo wax badan nooga sheegaya.
Waxaa jiri doona noocyo badan oo RAM iyo ROM ah oo ah Huawei Mate 30
TENAA, oo ah wakaalada caanka ah ee shahaado siinta Shiinaha, ayaa soo bandhigtay liisas cusub oo tilmaamaya RAM iyo ROM noocyo badan oo ka mid ah Huawei's Mate 30.
OPPO A5 2020 mar horeba wuxuu ku leeyahay qiimo iibka gud